ပဲသီးပဲပုပ်ကြော် ရှမ်းဟင်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ပဲသီးပဲပုပ်ကြော်လေးဟာ ပုံမှန်စားနေကြနဲ့ မတူအနံ့ အရသာရှိလှတဲ့ဟင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ကြော်စားကြည့်ရအောင်နော်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်း ♦ ပဲတောင့်ရှည် – တစ်စည်း ♦ ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ် – တစ်ဇွန်း ♦ ကြက်သွန်ဖြူ – ၃ မြှောင်း ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ယခုဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီး ပွင့်လင်းမြင်သာဖြစ်လာလို့ ပြည်ပမှ စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာကြသလို အစားအသောက်မျိုးစုံလည်း ဝင်ရောက်နေရာယူလာကြပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ကျွန်တော်အကြိုက်တွေ့တဲ့ အစားအသောက် (၃)မျိုးလုပ်ပေးပါမယ်။ 1. Greek Salad, 2. Pescatora Spaghetti, 3. Pan-seared Butter Fish Fillet တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Greek ....
ကွေတီယိုကြော် ထိုင်းမှာစားလေ့ရှိကြတဲ့ ကွေတီယိုဆန်ပြားကို ဝက်သား၊ ကြက်သား၊ အမဲသား စသည်ဖြင့်နှစ်သက်ရာ အသားများနဲ့ကြော်တဲ့ ပုံစံလေးကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကွေတီယိုဆန်ပြားနေရာမှာနှစ်သက်ရာခေါက်ဆွဲ၊ ကြာဆံတို့ကိုလည်း စိတ်ကြိုက်အစား ထိုးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ► ဆီသတ်ရန် ♦ ဆီ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း ♦ ချင်း ....
၀န်ချတောင်းပန် ချက်ကြည့်ရန် မတ်လမှာတော့ ဆရာမနန်းစန်းစန်းအေးက’မရမ်းသီးငါးပိချက်’ အပါအဝင် ဟင်းလျာအတွဲအစပ် (၇)မျိုးကို စီစဉ်ထားပါတယ်။ အဆိုပါဟင်းလျာအတွဲ အစပ်များကတော့ – ၁။ ဘဲသားအာလူးအချိုချက်၊ မဆလာဟင်းအရွက်စုံကြော်၊ သခွားဖိသုပ်၊ နံနံမျှစ်၊ ငရုတ်သီးထောင်း၊ ၂။ ငါးနှင့်မရမ်းပြားချက်၊ ဂျပန်တို့ဟူးဆီပြန်၊ ကိုက်လန် ရွက်ကြော်၊ ပူစီနံငါးပိထောင်း၊ ၃။ ....
Damson Paradise ကဲ မော့တေးလ်ကြိုက်နှစ်သက်သူများအလှည့်သို့ ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ ဒီတစ်လတော့ အရသာ နည်းနည်းထူးထူးဆန်း ဆန်းဖြစ်စေမယ့် မော့တေးလ်တစ်မျိုးကို ထည့်သွင်းလို့ထားပါတယ်။ တစ်ရက်စာရေးသူ ပွဲတစ်ခုကို အကူအညီတောင်းလို့ သွားလုပ်ပေး ပါတယ်။ အဲ့မှာကိုယ်နဲ့လည်းအရမ်းရင်းနှီးတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်က စသလိုလိုနဲ့ ကော့တေးလ်တွေ မော့တေးလ်တွေကို တခြားအသီး အနှံတွေနဲ့တော့ ဖျော်တယ်၊ ....
ကဏန်းလက်မငရုတ်ကောင်းကြော် ဒီနည်းလေးက ငရုတ်ကောင်းရနံ့မွှေးမွှေးလေးနဲ့ ကဏန်းခွံမီးထိတဲ့ ရနံ့မွှေးမွှေးလေးဖြစ်နေတာကြောင့် စွဲမက်စရာရနံ့နဲ့ ထူးခြားတဲ့အရသာကိုပေးပါတယ်။ ချက်နည်းလေး ရိုးရှင်းပေမယ့် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အစပ် အဟပ်ကို ပိုပြီးအသားပေးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ ကဏန်းလက်မ – ၆ ချောင်း (အခွံများထုထားပါ) ♦ ငရုတ်ကောင်းအမည်း – ၁ဝ ....